हिसाब–किताब गरेको छैन - कुराकानी - साप्ताहिक
हिसाब–किताब गरेको छैन
फुलन्देकी आमा मुन्द्रेको कमेडी क्लबमा धेरै जनाबाट रुचाइएकी पात्र हुन् । ठट्यौली पाराका उनका रमाइला भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा निकै मन पराइन्छ । परम्परागत लिम्बू पहिरनमा अधबैंसे महिलाको भूमिकामा देखिने ती युवा हुन्– भोजपुरका उमेश राई । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएको दुई वर्षमै उनले नसोचेको माया एवं सफलता प्राप्त गरेका छन् । युवापुस्ताका प्रिय कलाकार उमेश (फुलन्देकी आमा) सँग प्रकाश रानाभाटको जम्काभेट :
के–केमा छ व्यस्तता ?
अहिले नेपाल भित्रका स्टेज कार्यक्रमहरू, गर्दै आएको मुन्द्रेको कमेडी क्लब तथा म्युजिक भिडियोहरूमा व्यस्त छु । बेलाबेला देशबाहिरका कार्यक्रमहरूमा पनि पुगिरहेको हुन्छु ।
पुरुष भएर पनि महिलाको रूपमा चाहिँ किन प्रस्तुत भएको नि ?
कार्यक्रममा केही रोचकता ल्याउन तथा नयाँ प्रयोग गर्ने सोचले महिलाको भूमिकामा देखिएको हो । प्राय: सबैजसो कार्यक्रममा कलाकारहरू आफ्नो वास्तविक रूपमै प्रस्तुत हुन्छन् । केही नौलो र छुट्टै गरौं भनेर फुलन्देकी आमाका रूपमा प्रस्तुत भएको हुँ ।
वास्तविक रूपमा बाहिर हिँड्दा त शुभचिन्तकहरूले चिन्दैनन् होला होइन ?
सुरुसुरुमा चिन्नु हुन्नन्थ्यो । बाहिरतिर देख्दा यो केटा त फुलन्देकी आमाजस्तै रहेछ, त्यस्तै देखिन्छ भनेको सुन्थे । हिजोआज भने धेरैले चिन्नुहुन्छ ।
यो क्षेत्रमा चाहिँ कसरी आउनुभयो ?
नेपाल आइसकेपछि मैले फुलन्देको बाउ र आमा बनेर तयार पारेको भिडियो धुर्मुस दाइले पनि हेर्नुभएको रहेछ । उहाँले भेटम् भन्नुभयो । उहाँसँग भेटेपछि हास्य टेलिचलचित्र ‘गज्जब छ बा’ मा काम गर्ने अवसर मिल्यो । त्यहाँ काम गर्दागर्दै जितु नेपाल दाइसँग भेट भयो । उहाँ कमेडी क्लबको तयारीमा हुनुहुँदो रहेछ । त्यहाँ मैले फुलन्देकी आमाको चरित्रमा काम थाले, जसलाई धेरैले रुचाउनुभयो ।
फुलन्देकी आमाको चरित्रचाहिँ कसरी निर्माण गर्नुभयो ?
हङकङमा बस्ने एकजना दाईले पुर्वेली लवजमा फुलन्देको बाउ बनेर बोलेको अडियो म्यासेन्जरमा पठाइरहनुहुन्थ्यो । मैले त्यसलाई अलि पृथक् तरिकाले फुलन्देको बाउ र आमा बनेर भिडियो तयार पारी फेसबुकमा राखे । त्यो भिडियो धेरैले रुचाए । धुर्मुस दाइले ‘गज्जब छ’ का लागि कुरा गरेपछि मैले त्यो लवजलाई फुलन्देकी आमाका रूपमा प्रस्तुत गरें । त्यो चरित्रका लागि सुहाउँदो पहिरन तथा आनीबानीको विकाससमेत गरे ।
कलाकारितामा आउनुभन्दा पहिले के गर्नुहुन्थ्यो ?
दुई वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा साउदी अरब गएको थिएँ । त्यहाँ म स्टोर किपरको काम गर्थें । त्यहाँ रहँदा पनि म मोबाइलको सहयोगमा सानोतिनो हास्यप्रधान भिडियो निर्माण गर्थें ।
कलाकार बन्छु भनेर कहिल्यै सोच्नु भएको थियो ?
कहिल्यै सोचिन,यदि सोच्थे भने बाहिर किन पो जान्थे र ? नेपालमै कलाकार बन्न मेहनत गर्थे नि, यद्यपि म सानैदेखि अरूले बोलेको नक्कल गर्थे । त्यहीँ बानी नै मेरा लागि सञ्जीबनी साबित भयो ।
तपाईंको लक्ष्य ?
अब कलाकारिताको क्षेत्रमा निरन्तर लागिरहने र यसैमा केही गर्ने सोच छ । यो क्षेत्रलाई आÏनो कर्मले थप उचाइमा पुर्‍याउन मन छ । आफूलाई निखार्दै कला र कलाकारिताको विकासमा लाग्ने योजना छ ।
अभिनयबाहेक अन्य रुचि के–केमा छ ?
गीत, संगीत तथा सामाजिक कार्यहरूमा पनि रुचि छ ।
तपाईंको पारिवारिक स्थिति के–कस्तो छ ?
बढेको छोरा भएपछि घरपरिवारमा आÏनो भूमिका त निर्वाह गर्नैपर्‍यो, तर घरमा अहिले ठीकै छ । आमाबुवाले सकेको आफैं गरिरहनुभएको छ । मैले पनि सोचविचार गरेर आÏनो कर्तव्य निर्वाह गरिरहेको छु ।
मासिक आम्दानी कति छ ?
अहिलेसम्म यतिउति भनेर हिसाब–किताब गरेको छैन । जे होस् आफूलाई पुगेको छ । म सन्तुष्ट छु ।
खर्चचाहिँ के–केमा गर्नुहुन्छ ?
लत्ताकपडाको किनमेल तथा साथीभाइ भेटघाटमै खर्च गर्छु । धेरै चाहिँ लत्ताकपडामै
खर्च हुन्छ ।
कलाकारिताबाहेक आम्दानीको अन्य स्रोत पनि छ ?
मुख्य स्रोत नै यहीँ हो । अरू त्यस्तो केही छैन । फुलन्देकी आमा नामको एउटा युट्युब च्यानल छ । त्यसबाट आएको केही पैसाले यताउता गर्न पुग्छ ।
कसैको प्रेम सम्बन्धमा हुनुहुन्छ ?
आजसम्म कसैको प्रेममा परेको छैन ।
प्रस्ताव त आउँछन् होला नि ?
धेरैले प्रस्ताव राख्नुहुन्छ । अहिलेसम्म दोधारमै छु । अबचाहिँ रोज्ने विचारमा छु ।
सडक दुर्घटना हेर्ने जिम्मेवार निकाय नै छैन
‘सेयर बेसिसमा काम गर्नुको विकल्प छैन’
विकास बोर्डको अध्यक्षमा हमालको मुड छैन
राजु लामाको ‘बिहे नगरी भा’छैन’
नयाँ आविष्कारलाई प्राथमिकता दिएका छौं फाल्गुन ५, २०७६
नेपालमा एआईको प्रचुर सम्भावना छ माघ २८, २०७६
चलचित्र क्षेत्रमा नयाँ अनुहारका लागि डरलाग्दो अवस्था छ माघ २६, २०७६
समुहमा काम गर्दा खर्च कम हुन्छ माघ १५, २०७६
‘सेयर बेसिसमा काम गर्नुको विकल्प छैन’ माघ १५, २०७६
‘व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग्न सक्नुपर्छ’ माघ १४, २०७६
थोरै पारिश्रमिक दिएर धेरैको कागज गराउँछन् माघ १३, २०७६
ट्याक्सी चालकको आम्दानी खोसेका छैनौँ माघ ६, २०७६
‘साइबर अपराधबाट टिनएजर बढी प्रभावित’ पुस २३, २०७६
‘त्यसपछि आशाजी तुरून्त तयार भइन्’ पुस १४, २०७६